1965 Chinese Chinese ZodiacStrengths, Hunhu & Rudo - Zodiac
network haina kuwanikwa iphone 5
iphone 5 skrini yekukuvara kwemvura
iphone ios 7 kamera nhema nhema
1965 Chinese Zodiac - Simba, Kuneta, Hunhu & Rudo
Vanhu vakazvarwa mukati memakore anotevera eChina khalendari Nyoka: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, uye 2025.
Nyoka inobata nzvimbo yechitanhatu mu Chinese horoscope . Mhuka gumi nembiri dzeChinese horoscope dziri, dzakateedzana: Rat, Ox, Tiger, Tsuro, Dhiragoni, Nyoka, Bhiza, Mbudzi, Tsoko, Jongwe, Imbwa, uye Nguruve. Gore rega rega zvine chekuita nemhuka yeiyo Chinese horoscope maererano neC12-gore kutenderera.
Kana iwe wakazvarwa mugore ra Nyoka , uri Nyoka .
Zvinowanzo taurwa kuti gore reChina zodiac rinotanga muChinese Idzva Idzva, iro rinotangira kubva kupera kwaNdira kusvika pakati paKukadzi.
1917 Ndira 23, 1917 - Kukadzi 10, 1918 Moto Nyoka
1929 Kukadzi 10, 1929 - Ndira 29, 1930 Nyoka yepasi
1941 Ndira 27, 1941 - Kukadzi 14, 1942 Nyoka yegoridhe
1953 Kukadzi 14, 1953 - Kukadzi 3, 1954 Nyoka Yemvura
1965 Kukadzi 2, 1965 - Ndira 20, 1966 Nyoka yehuni
1977 Kukadzi 18, 1977 - Kukadzi 6, 1978 Moto Nyoka
1989 Kukadzi 6, 1989 - Ndira 26, 1990 Nyoka yepasi
2001 Ndira 24, 2001 - Kukadzi 11, 2002 Nyoka yegoridhe
2013 Kukadzi 10, 2013 - Ndira 30, 2014 Nyoka Yemvura
2025 Ndira 29, 2025 - Kukadzi 16, 2026 Nyoka yehuni
Zvinhu zvine rombo rakanaka kune vanhu vakazvarwa mugore reNyoka
Zvinhu zvine rombo rakanaka reNyoka.
Rombo nhamba : 2, 8, 9, uye nhamba dzinova nazvo (senge 28 na89)
Mazuva erombo: yekutanga nemakumi maviri nematatu emwedzi weChina
Runyararo mavara: nhema, tsvuku, uye yero
Maruva ane rombo: Orchids uye Cacti
Luck Direction: Kumabvazuva, Kumavirira, uye Maodzanyemba akadziva kumadokero
Mwedzi ine rombo rakanaka: mwedzi wekutanga, wechisere, uye wegumi nemumwe wechiChinese
Zvakaipa zvinhu zveNyoka.
Akaipa erombo mavara: shava, goridhe, chena
Nhamba dzakaipa dzehombe: 1, 6, uye 7
Iko kunongedzera kwerombo rakanaka: kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero
Mwedzi yemhanza yakaipa: yechitatu, yepfumbamwe uye yegumi nemiviri mwedzi yemwedzi weChinese
Nyoka dzine pfungwa dzakadzika uye dzakapinza, asi kana dzichida, dzinoda nemoyo yadzo yese.
Nyoka dziri zvinosetsa uye zvakaoma . Ivo havadi kutaura kana kufunga nezvematambudziko madiki ezuva nezuva.
Munzvimbo ine mhirizhonga, ivo ziso remhepo. Nyoka dzinogona kumira dzakasimba uye kufunga zvakadzikama pamusoro pemhinduro.
Ivo vanogara vachigadzira zvirongwa zvitsva uye votevera ivo vasingavimbe nemhinduro dzevamwe. Ivo anowanzo kuve akarurama, asi izvi zvakare zvinouya kubva mukusavimba kwevamwe. Iwe haugone kutonga Nyoka nebutiro rayo. Yake inononoka uye nehusimbe hurukuro inovanza kufunga kwake kwakakurumidza. Shure kwekudzikama kwavo, ivo vakasvinura uye vanocherekedza.
Asi akazvarwa mugore reNyoka anoshamisa uye ane ruzivo. Ivo vanyoro uye vanoziva kutaura zvakanaka zvinhu. Mune yakashata mamiriro, iwe unogona kugara uchivimba navo kuti vataure joke.
Kusiyana nevamwe, varume ava vanotenda murudo. Ivo vanowanzo kupa kwavo kumwe kutapira uye kune chinangwa kushamisika. Ivo zvakare vakasika uye vanonzwisisa.
Nekudaro, ivo vanoshuvira kuve pakati pekucherechedzwa uye nekukurumidza kuita godo. Izvi zvinoita kuti kushamwaridzana kuve kwakaomera ivo.
Vakadzi akazvarwa mugore reNyoka ane runako. Ivo vakanaka, zvese mukati nekunze. Chivimbo chake chinoratidzwa mune yake yepamusoro fashoni uye kuonga kweyekutanga art.
Ivo vanogara vachifunga nezve ramangwana, kunyangwe vachiwanzoita sekunge vasina hanya. Vane tsika dzakakwirira kushamwari. Vanoda hupfumi nesimba. Nenjere dzako nehunyanzvi, kubudirira hakufanirwe kunge kuri dambudziko.
Zvisinei, kukanganisa kwake kukuru igodo rake. Havagoni kutsungirira kuona vamwe vari kubudirira zvikuru. Nekudaro, izvi zvinova kurudziro yekushanda zvakanyanya uye kugadzirisa.
Ivo vekunyika yechiratidzo cheyoka vane chinokwezva chinokwezva, chakarungwa nehungwaru hwakapinza.
Ivo vanofungisisa asi, panguva imwechete, zvine hungwaru, pamwe nekugona kwazvo kubata vanhu uye vavariro dzavo, nekudaro, vari kunetseka kuti vanyengere.
Vanhu vanozvarwa mugore renyoka vanokwezvwa kudivi remweya rehupenyu, asi havangakwanise kuvhara mamonki sezvo, sehofisi chaiyo, vanofanirwa kudurura ganda ravo ... ndiko kuti, shanduka uye vanzwe kuvandudzwa nguva zhinji . Mamiriro ekunze.
Kuremara kwakaipisisa kwevanhu vakazvarwa pasi pechiratidzo chenyoka ndechekuti vane hutsinye uye, kana vakanzwa kurwadziwa zvakanyanya, vanogona kutsiva kuti vadzore kubva mukukuvara kwakakonzera munhu wavo.
Iyo nyoka inoyevedza uye inopa kureba kwakadzikama kunoipa iyo kunyanya kukwezva. Iye anowanzove shamwari inonakidza yekuita hurukuro dzinonakidza, nepo dzichinakidza, nepfungwa uye nehungwaru yekuseka, pamwe nekupopota.
Vanhu vanozvarwa mugore renyoka vanowanzo kuve nerupo kushamwari uye vanofarira kuvapuruzira. Asi chenjera! Kana vachinzwa kurwadziwa, iyo nyoka inoruma inova chombo chavo uye vanoziva mashandisiro ayo kukuvadza.
Nyoka murudo uye mhuri
Chiratidzo chenyoka kazhinji chinodhura hukama hwakagadzikana nekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuzvipa zvachose kumunhu. Asi kana afunga kuenda kune zvese izvi, nyoka inotarisira kuti mumwe wake agoraramira iye chete, anova anowana, uye izvi zvinogadzira magumo ehukama hwakawanda ihwohwo.
Avo vanozvarwa mugore renyoka vanowanzove vanozvida asi vanoda kuchengeta mhuri yavo. Kana vakagamuchirwa zvakanaka, vanogona kuve vabereki vane rupo, asi kana vasingade zvinoitwa nevana vavo, vanozogara vachitsoropodza.
Iyo Nyoka ndeye nyama. Ivo vanhu vanofarira hukama. Munzvimbo yepedyo, ava pane dzimwe nguva vanhu vanoda zvinhu izvo vamwe vangazviona sekunyanyisa. Iyi Nyoka ine chimwe chizvarwa chekuzvarwa icho dzimwe nguva chinouya sekuzvikudza kune vamwe, chichivaita vanoda kutonhorera.
Iyo Nyoka haina manyawi, asi iri mumusoro wayo nekuti vanofunga zvakawanda. Iyo Nyoka iri, panguva imwechete, ine shungu uye nemanzwiro. Vanhu ava vanogona kusangana nezvinhu zvakadzika. Izvi zvinoita kuti ivo dzimwe nguva vanzwe zvakanyanya uye dzimwe nguva vanoremedza. Vanhu ava vanofarira kutamba, uye kazhinji, iyo Nyoka ichatora nhanho yekutanga.
Iyo Nyoka inosarudzika mune vamwe vayo. Iyo Nyoka inogona dzimwe nguva kuita senge ine godo, inobata, kana kupenga. Nyoka inoda mumwe wayo ane moyo murefu uye anokwanisa kudzikamisa Nyoka kana Nyoka ikabatika mune dzayo pfungwa dzefilosofi.
Zvimwe zvakanaka musanganiswa
Nyoka - Hare
Slang uye Haas vane zvakawanda zvakafanana. Izvi zvichaita kuti vanzwe kukwezva kune mumwe nemumwe. Hukama uhwu hunoshanda zvikuru, asi hahune shungu.
Nyoka - Dhiragoni
Vaviri ava vanonzwisisana zvakanaka uye mubatanidzwa chaiwo, pamwe nekuti vese vanowira pasi pezvinokambaira?
Nyoka - Bhiza
Izvi zviviri zvinogona kukurudzira mumwe nemumwe. Vanofanira kuziva zvinoitwa nemumwe. Ipapo uku kunenge kuri iko kusanganisa chaiko kwavanogona kufambidzana zvakanaka.
Nyoka - Imbwa
Iyo Imbwa ine kutenda muNyoka, saka kusanzwisisika kusangana uku kuchashanda zvakanyanya.
Nguruve neNyoka zvinopesana zvachose. Ivo, saka, havangambokwanise kukwanisa kunzwisisana pfungwa dzeumwe neumwe. Semuenzaniso, iyo Nyoka inongwarira uye inofunga zvakadzama isati yaita, nepo Nguruve ichikurumidza.
Vagari vegore renyoka vane pfungwa huru yekuronga uye nekugadzirisa nguva. Saka chinongedzo chinenge chakanakira nyoka. Ivo vanowanzo kuzvikumbira ivo pachavo uye zvakare vanobatsira kwazvo.
Iwe hausi kuzowana nyoka yakagarira muposvo; dzinofanira kuvandudzwa. Ivo vanofarira kusimudzira zvehunyanzvi uye mabasa anovapa mukurumbira munharaunda kana mari yakanaka.
Vanhu vakakurumbira vakazvarwa mugore renyoka
Pakati pevanhu vanozivikanwa kwazvo vanozvarwa mugore renyoka, tinogona kuratidza:
Martin Luther King, Fedor Dostoevsky, Pablo Picasso, Mao Tse-tung, Diego Velázquez, Edgar Allan Poe, Goethe, Faye Anotiza, Joan Miró, Greta Garbo naHenry Fonda
Mhando shanu Nyoka, iwe ndiwe ani?
MuChinese element dzidziso, yega zodiac chiratidzo chinosanganiswa nechimwe chezvinhu zvishanu: huni, moto, ivhu, goridhe (simbi), uye mvura, semuenzaniso, huni hwehuni hwunouya kamwe chete mukati memakumi matanhatu emakore kutenderera.
Iko kune dzidziso yekuti hunhu hwemunhu hunosarudzwa nemhuka zodiac sampuro yegore ravo rekuzvarwa uye chinhu. Saka pane mhando shanu dzeNyoka, imwe neimwe iine hunhu hwakasiyana.
Gore reImbwa, Chinese Zodiac 2020
Mukadzi Capricorn uye murume weAries: kuenderana kwe…